Maxaad ugu adeegsataa SMM shabakadda bulshada iyo durdurrada muusikada?
Thanks to shabakadaha bulshada, waxaad u oggolaanaysaa dhagaystayaashaadu inay dareemaan inay ku lug leeyihiin astaantaada. Markaad la shaqeyso dhagaystayaashaada, waxaad ku horumarin kartaa adeeggaaga adoo kordhinaya heerka aaminka ee macaamiisha.
Laakiin, kahor “ka soco” bulshada dhexdeeda. Shabakad, waxaad ubaahantahay inaad go aansato naftaada iyo in kale iyo ganacsigaaga inaad ubaahantahay. Ma waxay ku yiraahdaan bulshada dhexdeeda. Shabakado ku saabsan badeecado lamid ah kuwaaga? Ma jiraa bulsho. iskuxirayaasha dhageystayaasha bartilmaameedkaaga iyo muxuu yahay cabirkiisu?
Iyo mid kale oo ah, qodobka ugu muhimsan: ma haysaa wax aad ugu sheegto dhagaystayaashaada shabakadda ku saabsan?
Hadda aan ka hadalno halka aad aadi karto (shabakadaha bulshada ee aad dooran lahayd markii aad ku dhiirrigelineysid mashaariicdaada internetka).
Markii aad dooraneyso boggag aad uga qeybqaadaneyso xayeysiintaada, waa in la ogaadaa inaadan u baahneyn "isla markiiba" isla markiiba dhammaan warbaahinta hadda jirta.
Falanqee waxa dhagaystayaashaadu bartilmaameedsanayaan, oo u kaxee bogaggaaga halkaas. Badanaa adeegyada ugu caansan waa: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, SoundCloud, Spotify, AppleMusic iwm.
Muhiim! Waad arki kartaa dhaqdhaqaaqa taraafikada ee shabakadaada shabakadaha bulshada adoo adeegsanaya Google Analytics.
Ka hadlida shabakadaha bulshada, waa in la ogaadaa in kuwa ugu 'aasaasay' iyo kuwa daawadayaasha xalka isticmaala ay isticmaalaan Facebook.
Twitterku waa malaha microblog-ka ugu caansan, laakiin isgaadhsiinta dhexdeeda waa inay noqotaa mid dhakhso leh. Waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah ula socoto Twitter-ka waana muhiim in aadan iloobin.
YouTube waa mid ka mid ah goobaha ugu wanaagsan ee lagu daawado fiidiyoowga adduunka. Waxay ka kooban tahay balaayiin fiidiyoow ah. Tiro aad u badan oo adeegsadayaal ah ayaa ku dhegan sumadda, iyagoo ku arka xayeysiintooda YouTube. Shabakadani waxay leedahay “aaminaad sare oo aamin ah” isticmaaleyaasha.
Muhiim! Markaad bog ku bilowdo shabakadaha bulshada, ha ilaawin inaad ku ogeysiiso waxa ku yaal boggaaga rasmiga ah!
Ka hadlida sida loo socdo (maxaa si sax ah u sameyneynaa si aan ugu hormarinno shabakadaha bulshada), waxaan ula jeednaa dhammaan ficiladaas oo daneyn kara dadka isticmaala.
Marka hore, waxay noqon kartaa tartanno (kaqeybgal, wacitaan ficil), howlagallo (ballaarinaya gaaritaanka dhageystayaasha), dalacsiin iyo barnaamijyo gunno ah (oo keliya macaamiisheeda), iwm.
Marka labaad, mashaariicda gaarka ah. Kuwaani waa mashruuc gaagaaban oo si gaar ah loogu takhasusay, leh dano weyn iyo soo laabasho wanaagsan.
Marka saddexaadna, waxay noqon kartaa maqaallo waxtar leh, qoraallo, fiidyowyo, talooyin ama aqoon isweydaarsiyo xiiso u leh bulshadaada oo ay ku farxi doonaan inay macluumaadkan la wadaagaan asxaabtooda.
Iskuday inaad siiso waxyaabaha ku habboon xaaladda niyadda dadka isticmaala. Xitaa waad burburin kartaa mowduucyada maalinta usbuuca.
Isniinta - maalinta ka dambeysa usbuuca dhammaadka wiigga, marka adeegsadayaashu (inta badan) ay ku jiraan xaalad niyad jab ah, iyadoo la filaayo isbuuc dheer oo shaqeynaya, maanta waa inaysan "ku shubin" isticmaaleyaasha macluumaad aad u badan.
Talaadada waa maalin wanaagsan, qof walbana wuxuu si firfircoon u bilaabayaa inuu ka qeybqaato shaqada oo diyaar u yahay inuu "cuno" macluumaad cusub.
Arbacada ayaa loo arkaa inay tahay maalinta ugu wax soo saarka badan toddobaadlaha, maadaama qof walba uu si firfircoon u shaqeynayo isla mar ahaantaana ay si firfircoon uga qeybqaadan karaan barbaro iyo tartamo kala duwan.
Khamiista, dhammaan adeegsadayaashu waxay si habsami leh u bilaabayaan inay ka fekeraan dhammaadka wiigga, maantana aragtida aragtida macluumaadka ayaa hoos u dhacda, in kasta oo waxyaabaha waxtar leh ee “ku xidhan” qabashada usbuuca dhammaadka si wanaagsan loo arki doono.
Qof walba wuxuu qorsheynayaa usbuuca dhammaadka Jimcaha, sidaa daraadeed nuxurka waa inuu ahaadaa mid joogto ah.
Sabti iyo Axad - maalmaha fasaxa iyo adeegsadayaashu waqtigooda waxay ku qaataan qadka khadadka, taas darteed, waxaad ku qaadan kartaa fasax illaa Isniinta.
Isku day inaad cusboonaysiiso waxa ka kooban wax aan ka badnayn seddex jeer maalintii, iyo si wax walboo loo qaabeeyo ay aad ugu habboon tahay inaad haysatid cinwaanno gaagaaban oo keliya (mowduucyadooda ayaa lagu xiri karaa "maalmaha toddobaadyada"). Iyada oo la adeegsanayo qaab aan caadi ahayn oo hal abuur leh si loo abuuro waxyaabahaaga, dhagaystayaasha macaamiishaadu way kori doonaan.
Xusuusnow, dhammaan macluumaadka aad soo dirto waa inay khadka tooska ah uga galaan internetka. Hadeysan taasi dhicin, falanqee, malaha waxaad siineysaa macluumaad qaldan ama dhagaystayaasha qaldan.
Laakiin, ka hor inta aadan ka fikirin waxa nuxurka aad siinaysid isticmaaleha, waxaa aad muhiim u ah in la go'aamiyo sida xiriirkaaga aad si gaar ah loogu dhisi doono.
Ma u abuuri doontaa naftaada mid astaan ​​ah oo aad ku sameyneysid isgaarsiin adiga ku matalaya, laakiin matalaya shirkada iyo inaad abuurto xiriirro la yeelanaya isticmaaleyaasha, ama ma waxaad noqon doontaa bogga shirkadda ama adiga ama qof kale oo ka socda shirkadda aad sameyn doontaan, laakiin si qarsoodi ah, inaad kordhiso aqoonsiga si gaar ah u astaan.